ball pen,ball pointpen,gel pen
​Qingdao Yanshan Guiyu Trade
<h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Model NO.:CFB-44</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Ink Type: Dokumental </span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Ink Color: Black, blue</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Open Type:Plug bush</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Point Type: Bullet Type</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Erasable: Unerasable</span></h1><p><br/></p>
UV Plated Ball Pen
<h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Model NO.:CFB-45</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Ink Type: Dokumental </span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Ink Color: Black, blue</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Open Type:Click</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Point Type: Bullet Type</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Erasable: Unerasable</span></h1><p><br/></p>
<h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Model NO.:CFB-46</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Ink Type: Dokumental </span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Ink Color: Black, blue</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Open Type:Click</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Point Type: Bullet Type</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Erasable: Unerasable</span></h1><p><br/></p>
Coating Silver Ball Pen
<h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Model NO.:CFB-47</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Ink Type: Dokumental </span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Ink Color: Black, blue</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Open Type:Click</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Point Type: Bullet Type</span></h1><p style="line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Erasable: Unerasable</span></p><p><br/></p>
<h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Model NO.:CFB-48</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Ink Type: Dokumental </span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Ink Color: Black, blue</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Open Type:Twist</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Point Type: Bullet Type</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Erasable: Unerasable</span></h1><p><br/></p>
<h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Model NO.:CFB-49</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Ink Type: Dokumental </span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Ink Color: Black, blue</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Open Type:Click</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Point Type: Bullet Type</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Erasable: Unerasable</span></h1><p><br/></p>
<h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Model NO.:CFB-50</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Ink Type: Dokumental </span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Ink Color: Black, blue</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Open Type:Twist</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Point Type: Bullet Type</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Erasable: Unerasable</span></h1><p><br/></p>
<h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Model NO.:CFB-51</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Ink Type: Dokumental </span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Ink Color: Black, blue</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Open Type:Twist</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Point Type: Bullet Type</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Erasable: Unerasable</span></h1><p><br/></p>
<h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Model NO.:CFB-52</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Ink Type: Dokumental </span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Ink Color: Black, blue</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Open Type:Twist</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Point Type: Bullet Type</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Erasable: Unerasable</span></h1><p><br/></p>
<h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Model NO.:CFB-53</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Ink Type: Dokumental </span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Ink Color: Black, blue</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Open Type:Click</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Point Type: Bullet Type</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Erasable: Unerasable</span></h1><p><br/></p>
<h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Model NO.:CFB-54</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Ink Type: Dokumental </span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Ink Color: Black, blue</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Open Type:Click</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Point Type: Bullet Type</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Erasable: Unerasable</span></h1><p><br/></p>
<h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Model NO.:CFB-55</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Ink Type: Dokumental </span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Ink Color: Black, blue</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Open Type:Click</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Point Type: Bullet Type</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Erasable: Unerasable</span></h1><p><br/></p>
<h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Model NO.:CFB-56</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Ink Type: Dokumental </span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Ink Color: Black, blue</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Open Type:Click</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Point Type: Bullet Type</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Erasable: Unerasable</span></h1><p><br/></p>
<h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Model NO.:CFB-57</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Ink Type: Dokumental </span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Ink Color: Black, blue</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Open Type:Twist</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Point Type: Bullet Type</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Erasable: Unerasable</span></h1><p><br/></p>
Delicate Ball Pen
<h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Model NO.:CFB-58</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Ink Type: Dokumental </span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Ink Color: Black, blue</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Open Type:Click</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Point Type: Bullet Type</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Erasable: Unerasable</span></h1><p><br/></p>
Light Ball Pen
<h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Model NO.:CFB-59</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Ink Type: Dokumental </span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Ink Color: Black, blue</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Open Type:Plug Bush</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Point Type: Bullet Type</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Erasable: Unerasable</span></h1><p><br/></p>
Total 83 record(s)Home <Prev 1 … 23456 Next> Last
Copyright By ©Qingdao Yanshan Guiyu Trade Co.,Ltd.